CopyQ 4.1.0: Kedu ihe dị ọhụrụ na njikwa klipbọọdụ dị elu | Site na Linux
Linux Post Wụnye | 21/08/2021 06:00 | Aplicaciones, Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Nyere na ntakịrị ihe karịrị afọ 2 gara aga anyị nyochara a dị jụụ ma bara uru oku "CopyQ" mgbe ọ nọ n'akụkụ ya 3.5.0 mbipute, taa, anyị ga -enyocha nke ahụ akụkọ na -ewetara anyị nke ikpeazụ ya na ụdị kwụsiri ike ugbu a 4.1.0.
Maka ndị na -amaghị "CopyQ", nke a bụ otu ngwa ngwo ngwo na-arụ ọrụ dị ka a onye njikwa klipbọọdụ dị elu na ọrụ ndezi na edemede.
Dịkwa ka ọ dị na mbụ, tupu ị banye n'isiokwu ahụ, maka ndị nwere mmasị na ụdị ngwa a, ya bụ, ndị njikwa klipbọọdụ dị elu, ma n'ihi na ọnụ (consoles) anyị ga -akwado ịgagharị nke anyị metụtara post gara aga na isiokwu ahụ. Maka nke a, anyị ga -ahapụ njikọ dị n'okpuru:
"Ederede bụ ngwa na -enye anyị ohere itinye ederede na klipbọọdụ ma weghachite ederede site na ahịrị iwu. Ederede eweghachitere nwere ike ịbụ na ngwa ọ bụla ọzọ abanyela. N'otu aka ahụ, ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike itinye ederede etinyere n'ime klipbọọdụ site na xclip. Xclip: Na -emegharị klipbọọdụ site n'usoro ahịrị." Xmkpachị: Imebi klipbọọdụ site n'usoro ahịrị
xclip: animegharị ihe na desktọọpụ site na akara iwu
1 CopyQ: Ụdị ọhụrụ nwere ọrụ ọhụrụ
1.1 Kedu ihe bụ CopyQ?
1.3 Kedu ihe dị ọhụrụ na ụdị nke ugbu a 4.1.0
CopyQ: Ụdị ọhụrụ nwere ọrụ ọhụrụ
Kedu ihe bụ CopyQ?
"Ma ọ bụn elu-ikpo okwu dị elu na onye njikwa klipbọọdụ mepere emepe nke nwere ọrụ dịka akụkọ ihe mere eme, ọchụchọ na ndezi, yana nkwado maka ederede, HTML, onyonyo na ụdị omenala ọ bụla ọzọ. CopyQ na -enye atụmatụ edezi na edemede. Nyochaa klipbọọdụ sistemụ ma chekwaa ọdịnaya na ntuziaka omenala. Enwere ike idetuo na klipbọọdụ echekwara echekwara na ngwa ọ bụla."
La Usoro 4.X nke "CopyQ" na -agụnye n'etiti ọtụtụ ya njirimara nke ugbu a 10 ndị a:
Ọ na-enye nkwado ikpo okwu maka Linux, Windows, na OS X 10.9 na elu.
Chekwaa ederede, HTML, onyonyo ma ọ bụ usoro omenala ọ bụla ọzọ.
Na -agagharị ngwa ngwa wee hichaa ihe akụkọ ihe mere eme.
Ọ na -enye ohere ịhazi, mepụta, dezie, hichapụ, detuo / mado na ịdọrọ ihe na interface ya.
Na -enye ike itinye ndetu ma ọ bụ mkpado na ihe ejikwa.
Ọ nwere mkpirisi mkpirisi sistemụ nwere iwu ahaziri iche.
Mfe nke iji ụzọ mkpirisi ma ọ bụ site na tray ma ọ bụ isi window apịpịa ihe.
Ọ nwere ọdịdị ahaziri nke ọma.
Ọ nwere interface akara akara dị elu yana edemede.
Nkwado maka nchịkọta akụkọ na ụzọ mkpirisi dị ka Vim.
Kedu ihe dị ọhụrụ na ụdị nke ugbu a 4.1.0
Mgbe, na ugbu a anụ version n'okpuru nọmba 4.1.0 Nke ụbọchị 23 / 04 / 2021 na -ewetara anyị n'etiti ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, 10 ndị a:
Enwere ike iji sistemụ ngosi ochie ugbu a kama ọkwa ala / sistemụ. Enwere ike gbanyụọ nke a na taabụ ngosi n'ime mmasị.
Agaghị emepụta faịlụ nhazi ọzọ maka amamọkwa na -akpaghị aka.
N'edemede, enwere ike iji ihe njikwa maka ndekọ osisi, tụọ oge gafere, na ikwupụta ọnọdụ.
Nchịkọta mmecha iwu nwere ndepụta zuru oke nke ihe / ọrụ ihe / ọrụ edemede na nkọwa ka mma.
Iwu mkparịta ụka na iwu ugbu a anaghị edochi% 2 maka% 9. Nke a na -enye ohere na -agafe URL na -enweghị mkpa ịgbanahụ mkpụrụedemede ederede dị ka% 20 ma ọ bụ% 3A.
Nkọwapụta syntax maka hexadecimal na ụkpụrụ boolean na nchịkọta akụkọ iwu.
Dezie ngagharị nke isi mpio ahụ na ihuenyo dị iche.
Na Windows: A na -agbanyụ amamọkwa nke ala na Windows 7. Nke a na -edozi mbibi ahụ n'ihi atụmatụ anaghị akwado ya. Na doziri mbibi mgbe ị na -ebufe ụfọdụ isiokwu.
Maka Wayland: weghachite jiometrị ikpeazụ echekwara maka windo (ebe ịnweta ihuenyo ugbu a anaghị arụ ọrụ).
Ihe nrụpụta Windows MinGW dị ọzọ (enweghị nkwado ọkwa ala).
Mgbe anyị nwụnye site iwu ịtụ ọzọ, otu a ka anyị siri dị "CopyQ" na -agba n'ime anyị GNU / Linux Distro:
Cheta na: Maka ụzọ nrụnye ndị ọzọ, biko chọpụta ihe ndị a njikọ.
Maka ozi ndị ọzọ emelitere maka otu esi eji "CopyQ", ma site na ntụzịaka eserese ya, yana site na ahịrị iwu, cheta ileta ntinye anyị gara aga "CopyQ" ma ọ bụ chọta njikọ ndị a:
Ngalaba mwepụta kachasị ọhụrụ na GitHub
"Dị ka ọ bụ a clipboard, ngwa ugbua na-agba ọsọ ga-amalite na-arụ ọrụ ozugbo anyị na-edezi a akwụkwọ ma ọ bụ sọọfụ net." CopyQ - onye njikwa ihe osise nwere atụmatụ di elu
Na nchịkọta, dịka a hụla "CopyQ" bụ uru bara uru nke ga -enye gị GNU / Linux Distro otu njikwa njikwa dị elu, ma ọ bụrụ na ịchọghị iji ngwa ndabere, nke na -ejikarị ihe niile Mwepụ y Ebe obibi Desktọpụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » CopyQ 4.1.0: Ihe dị ọhụrụ na njikwa klipbọọdụ dị elu